“အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » “အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်”
- ဦးဦးကောလ ဟာလ
Posted by ဦးဦးကောလ ဟာလ on Mar 19, 2012 in Myanma News | 20 comments
ဂေဇက်ရဲ့စာမျက်နှာတွေကို ဖတ်လာတာကြာပါပြီ အခုတော့ဝင်ပြီးရေးချင်စရာလေးတွေရှိလို့ ကြားရသမျှကောလဟာလလေးများကို
ဒီလိုရေးသားဖြစ်အောင် ကျွန်တော့်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ဂေဇက်မန်ဘာဝင်သူငယ်ချင်း(အမည်မဖော်ပြပါနှင့်ဟုဆိုသောကြောင့်) ကိုလည်း
ကမ္ဘောဇဘဏ်ကုမ္ပဏီလိမိတက်မှ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ နမ့်စန်မြို့ကလေးရဲ့ထင်းရှူးမြိုင်ကျေးရွာလေးရဲ့အနောက်ဘက်တောင်
ကြောတစ်လျှောက်မှာ ကျောက်မီးသွေးတွေကိုအပြင်းအထန်ရှာဖွေထုတ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး ကိုကောလဟာလသတင်းတစ်ပုဒ်
အနေနဲ့ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ မြို့ခံတစ်ဦးရဲ့ပြောပြချက်အရတော့ ဒီလုပ်ငန်းကြီးကတကယ်သာအောင်မြင်ရင်ဘိန်းစိုက်ပြီး ရာမလုပ်ရောင်းတာထက်
ပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုပဲဗျ။ ကောလဟာလပြောပြတဲ့ ကောလဟာလသတင်းလေးကိုဒီလောက်ပဲရပ်ပါရစေနော်။ ကောလဟာလဆိုတာနဲနဲပဲလွှင့်ရင် များများဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတော့ ပိုသေချာအောင်တိတိကျကျစုံစမ်းပြီး သတင်းပေးပို့ပါဦးမယ်နော်……….
ဂေဇက်က စီနီယာမန်ဘာကြီးများကလည်း ကျွန်တော့်ဘက်ကလိုအပ်ချက်တွေ၊သင်ကြားရမှာလေးတွေရှိရင် သွန်သင်ပြသပေးရင်းဝိုင်းဝန်းဖေးမကူညီ
About ဦးဦးကောလ ဟာလ
ဦးဦးကောလ ဟာလ has written 1 post in this Website..
View all posts by ဦးဦးကောလ ဟာလ →
တွေကြီးဘဲ မလုပ်ပါနဲ့ ဆရာရယ်…
မှတ်ထားနော် သများနာမည် မဖရဲ
ကြိုဆိုပါတယ် ကောလဟာလ အဲ- ဦးကောလဟာလ ရယ်။
ပြောရမယ်ဆိုရင် လူကိုရော သတင်းတွေကိုပါ ကြိုဆိုပါတယ်။
(ကောလဟာလဆိုတာ သတင်းဦးသတင်းထူးကို ပြောတာ ဆိုပဲ)
ဒီမိုသဂျီးရဲ့ ရွာကြီးက သွားလာ ၀င်ထွက်နေသူအားလုံးကို ထိပ်တုံးမရှိ၊ နှစ်လုံးပြူးမလို ငြိမ်းချမ်းစွာ ကြိုဆိုနေတာမို့….
၀င်လာသမျှသော ကလေးသူငယ် လူကြီး လူငယ်မရွေးကို အော်တိုမစ်တစ် ကြိုဆိုပြီးသား ဖြစ်နေလို့ ..
ကြိုဆိုပါတယ် မရေးပြန်ရင်လည်း မကြိုဆိုဘူးလို့ ထင်မှာစိုးးးးးး
ကြိုဆိုပါတယ် လို့ ၀င်လာသူတိုင်းကို ရေးရမှာလည်း သဂျီး (ပွိုင့်) ကို အားနာ……
မင်္ဂလာပါ ဦးဦး …..
မာကလာပင်ပါ…လေးပေါက်စကားကို ယူသုံးလိုက်ဦးမယ်၊ ကြိုဆိုပါတယ် ဦးကောလ ဟာလ
မင်္ဂလာပါ။ ကြိုဆိုပါ၏ ဦးကောလ ဟာလ။
ဦးဦးနာမည်က ကောလဟာလဆိုပဲ… အတော့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ဘာတွေများ ဆက်လက်တင်ဆက်မယ်လဲဆိုတာ ကြိုဆိုရင်း စောင့်ကြည့်နေမယ်နော်…
ကျွန်တော်နာမည် မောင်အာဂ ပါ။
အမေက တော့ ရုံးစာရေးပါ။
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က မကြာမကြာ အရက်ခိုးသောက်ပါတယ်။
မိန်းမတစ်ယောက်ရှိပြီး ကလေးတော့ မရသေးပါ။
ဂေဇက်က မန်ဘာတွေနဲ့ တစ်ခါတစ်ခါလည်းတွေ့ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။မိတ်ဆက် တာတွေများလွန်းလို့ ကျွန်တော့်ကို မေ့နေကျသူများအတွက် ပြန်မိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အာဂမိတ်ဆက်နေသည် ဟု၍လည်း ပိုစ်တင်ရင် စိတ်ကူးရှိပါသည်။
ဦးဦးကောလ ဟာလ says:
“အဲဒါကောလ ဟာလပါကွာ တကယ်မမှန်ပါဘူး” တဲ့
တကယ်က ကောလ ဟာလ ဆိုတာ တကယ်ဖြစ်လာမယ့် အကြောင်းအရာကို ကြိုတင်သိပြီး အုတ်အော်သောင်းနင်း(အဲဒီအုတ်အော်သောင်းနင်းဆိုတာ ဘာလဲတော့ကြောင်လေးမသိ) ဖြစ်တာကိုဆိုလိုတာ။
“ဗုဒ္ဓ ကောလဟာလ” ဆိုတာ ဘုရားပွင့်တော့မယ်ဟေ့…………..လို့ နတ်ဗြမ္မာတွေက သိလို့ (ဖွချက်)အရ လူ့ပြည် နတ်ပြည်မှာ ကြိုတင်ပြီးအုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်တာကိုဆိုလိုတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ကြောင်လေးလဲ ဒီတစ်ခုပဲသိလို့ပြောတာ တခြားဟာ သိတော့ဝူး ၊သိချင်ရင် ဆရာတော်တွေ မေးကြည့် ပြောပြလိမ့်မယ်၊
ရဲ့ ကောလဟာလကို မျှော်နေမယ်နော်…
ကြောင်လေးရေးသလို ကောလာဟလ ဆိုတာ နောင်ဖြစ်လာမှာကို ကြိုတင်ပြောဆိုကြတာလို့မှတ်ဖူးပါတယ်။
တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ် မင်္ဂလာ တဲ့။
ကောလာဟလ ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် အမှန်တွေကို ကြိုတင် ဖော်ပြပေးနိုင်ပါစေ။
ကျွန်မ လဲ မေးတော့ မလို့ အစ်မ ပဒုမ္မာ ရေ။
ကောလဟာလ ဆိုတာ သတင်းမှန်ထက် ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ ဦးဦးကောလဟာလ ရှင့်။ :-)
အဲဒီ ကျောက်မီးသွေး ကြောကြီး ကတော့ အမှန်တကယ်တွေ့ ရုံမက ပြည်သူတွေနဲ့ပါ သက်ဆိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ကောလဟာလ တွေရှိမှ အမှန်တွေကလည်း ဗူးပေါ်သလိုပေါ်လာတာ
ကောလဟာလဆိုတာ မဟုတ်မမှန်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ် ကောလဟာလဆိုတာ ဟုတ်တာ မှန်တာကိုပြောတာပါ ကောလဟာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာကြားဖူးတယ် …. ကြားဖူးတာကို ပြောတာနော် သိချင်ရင်တော့ သိတဲ့လူတွေကိုမေးပါကွယ် ….
Welcome Par ဦးဦးကောလဟာလ
star flower says:
သယံဇာတဆိုတာများကတော့.. ဘာလုပ်ခွင့်ရရ… အင်မတန်မြတ်တာချည်းပါ…
ကျောက်မီးသွေးကတော့..သုံးကြမယ်ဆိုရင်.. လေထုညစ်ညမ်းတာဖြစ်ဖို့ ကိန်းဆများပါတယ်..။
ကျောက်မီးသွေးတွေ့ရင်.. အဲဒီသက်တမ်းမြေကြောမှာ.. စိန်ရှိတတ်တယ်တဲ့..။
ဥပမာ.. ကလေးဝမှာကျော်ကမီးသွေးရှိရင်.. အောက်က.. ပုံတောင်ပုံညာထက်..စိန်တွေ့သလိုမျိုးပေါ့..
မိတ်ဆက်တဲ့ မန်ဘာအသစ်ရော အဟောင်းပါ
သီတဂူဆေးရုံအတွက် အလှူငွေကိုလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြို ဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ…. ;)
ရဲဘော် အားကိုးပါတယ်။ ;)